Ihowuliseyili Sunglasses Bulk for Adult Party Favors Retro Classic Shades, custom imprinted wedding party sunglasses
Iziphathamandla zelanga zomtshato ezitywinwe ngokusesikweni zinokunikezelwa njengesipho sokwazisa kubo bonke abo baya kwitheko lomtshato. Amaqabane anokuhlala ekhetha ukunikela ngezi zibuko zelanga zesiko njengesipho kwaye afune izibonelelo anokuhlala ezi-odola ngamanani amakhulu. Izaphulelo ezikhulu zinikezelwa kwintengo enkulu. Umbala oqinileyo wombala omnyama weerabha zesiko. Zama iiglasi zelanga zomtshato ezinemibala engama-25. Ukhetho olufunyenweyo luyafumaneka.
Jonga i-amy sunglass kunye nelogo yakho ebhalwe ngokuchasene nayo, ungayivavanya kwaye uyilinge ngokungenamda i-intanethi yokuhlekisa ngoncedo lweengcali zethu zangaphakathi.
Iifomathi ezinokuhlelwa-silindele ukuba abathengi basithumelele iifayile zomsebenzi we-elextronic kwiifomathi ezihleliweyo. njenge-EPS PSD AI PDF njalo njalo
Uguquko -INKCAZO zonke iifonti kufuneka ziguqulwe zenziwe amagophe / ulwandlalo
Imowudi yombala -CMYK yindlela yemibala ekhethiweyo yokushicilela
. Ukucaca-Samkela kuphela i-JPEG kunye nemifanekiso ye-bitmap yesisombululo esingaphezulu kwama-300 dpi
Imveliso iqala kuphela emva kokufuna imvume yabathengi kuyilo kwaye abathengisi banokunxibelelana nathi ngexesha lobugcisa obumiselweyo bokwenza utshintsho kwimizobo
Imibala efumanekayo: Mnyama nge-Orenji, Mnyama Mnyama, Mhlophe Mhlophe, Mnyama Mhlophe, Mnyama mhlophe, Mnyama, Luhlaza, Luhlaza, Luhlaza, Mnyama, Bomvu, Bomvu, Bomvu, Bomvu, Bomvu, Bomvu, Bomvu, Bomvu, Bomvu, Bomvu, Ubomvu, Umbala o-orenji kunye no-Orenji, Mnyama, Mfusa, Mnyama ngeNeon.
Indawo yoShicilelo: 2 "X 3/8"
Ubungakanani beMveliso: Umntu omdala
Imveliso Ixesha: Iintsuku ezingama-25 zokuSebenza
Ixesha lokuhambisa lixhomekeke kwindlela yokuthumela ekhethiweyo.
Sivavanye izibini zelanga kwaye azibonakali zintle nje kuphela, zibonelela ngokhuseleko olukhulu lwamehlo. Iilensi zimnyama ngokufanelekileyo (mhlawumbi zimnyama kakhulu ukuba ungazinxiba izibuko zakho zelanga ebusuku, umzekelo, kodwa zigqibelele ngaphandle) kwaye zihlala kamnandi ezindlebeni zakho. Sigobile sazolula ukuze sizinze, kwaye bazibamba njengeentshatsheli, ke ungakhathazeki ukuba uyabaphosa okanye ngempazamo ubeke isipaji sakho kubo emotweni.
Okulandelayo: Iiglasi zoKhuseleko ngaphezulu kweiglasi iiGoggles zokukhusela zamehlo - Inkungu yamaGlasi yokudubula iiglasi zokuKhuselwa kwamehlo ngombono ocacileyo, ukukrwela kunye neeglasi zoKhuseleko eziXhathisayo zeV.
Iifashoni ezijikelezayo zelanga zabafazi ngeRivet P ...
Abantwana Face Shield ngeGlasi Isakhelo, Tran ngokupheleleyo ...